चीनदेखि रुसका राष्ट्रपतिले बाइडेनलाई किन बधाइ दिएनन् ? – www.neumine.com
चीनदेखि रुसका राष्ट्रपतिले बाइडेनलाई किन बधाइ दिएनन् ?
वासिङटन : अमेरिकामा हालै सम्पन्न निर्वाचन जो बाइडेनले जित्दा विश्व समुदायले उनलाई बधाइ दियो ।
चुनावी प्रतिस्पर्धाको बीचमा बोल्सोनारो र बाइडेनबीच त तिक्तता नै रहेको बताइन्छ । बाइडेनले ट्रम्पसँगको पहिलो बहसको क्रममा अमेजोन जंगल रक्षाका लागि ब्राजिललाई दबाब दिनुपर्ने बताएका थिए । तर बोल्सोनारोले लगत्तै उक्त भनाइको खण्डन गर्दै बाइडेनको भनाइलाई ‘विनाशकारी’को संज्ञा दिए । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु, फिलिपिन्सका राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते लगायत नेताहरुले भने बाइडेन निर्वाचित भएलगत्तै बधाइ दिएका थिए ।